Safiirkii Soomaaliya ee Masar oo lagu wado in Meydkiisa la keeno Muqdisho+Sawir – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
26th November 2015 MAREEG Af Soomaali 0
Janaasada Marxuumka waxay ka dhacday Masjidka Cumar Makram oo ku yaalla agagaarka xarunta Jaamacadda Carabta; fagaaraha Taxriir ee magaalada Qaahira. Waxaa janaasada ka soo qeyb galay madaxda wadanka Masar, danjireyaal iyo diblomaasyiin carbeed iyo kuwo Afrikaan ah. Waxaa dadkii ka soo qeyb galay ka dhex muuqday Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan, Xildhibaan Faarax Cabdulqaadir ahna Wasiirkii hore ee caddaalada, Safiirada Wadamada Djibouti, Ethiopia, Saudi Arabia, madax kale iyo dhamaan qeybaha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Masar.
Aaska Marxuumka ayaa waxaa lagu wadaa in uu ka dhaco magaala madaxda Wadanka ee Muqdisho maalinta khamiista ah oo ay taariikhdu tahay 26-ka November 2015.
Marxuum Cabdullaahi Xasan Maxamuud ayaa wuxuu ka mid ahaa danjireyaasha loogu ixtiraami ogyahay wadanka Masar; isagoo hormuud u ahaa Safiirada Carabta iyo kuwa wadamada Afrika. Marxuumka waxa uu hawlaha diblomaasiyadda ku soo biiray markii ugu horeysay sanadkii 1987-ka xilligaas oo loo magacaabay Safiirkii Jamhuuriyadda Soomaaliya ee wadanka Algeria.
Sanadkii 1990, waxaa loo badalay, loona magacaabay Safiirka Soomaaliya ee dalka Masar ahna Ergeyga Joogtada ee dalkeena uga wakiilka ah Ururka Jaamacadda Carabta, xilkaasi oo uu hayay tan iyo markii uu geeriyooday.
Sanadkii 1996-dii waxa uu ku fariistay Kursiga Shir Madaxeedkii Jaamacadda Carabta ee ku qabsoomay Magaalada Qaahira , isagoo matalayay Magaca Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya .
Danjire Cabdullahi Xassan Maxamud oo si weyn ay u yaqaanaan diblomaasiyiinta ,siyaasiyiinta carbeed iyo kuwa Afrika ayaa ka hor inta aanu ku soo biirin howlaha diblomaasiyadda , waxa uu ahaa sanadkii 1970 –kii Macallin wax ka dhiga dugsiyada sare ee dalka , iyadoo isla sanadkii 1972 –kii uu sidoo kale Macalin ka noqday Jaamacaddii Ummadda , isla sanadkaasi waxaa sidoo kale loo dalacsiiyay in uu maamule ka noqdo dugsigii Jamaal Cabdinaasir oo ahaa xilligaasi xarumaha waxbarasho ee ugu tayada wanaagsanaa dalka .
Sanadkii 1981 – kii waxaa loo magacaabay Lataliyaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Arrimaha Jabhadaha .
Danjire Cabdullaahi Xassan Maxamuud waxa uu ka qaatay Darajada Licentiate ee Luqadda Carabiga iyo Culuumta Islaamka, Kulliyadda Dar Al-ulum ee Jaamacadda Qaahira sanadkii 1969-kii.
Marxuum Danjire Cabdullaahi Xassan Maxamuud oo ifka kaga tagay laba xaas iyo 8 caruur ah, ayaa ku dhashay degmada iimeey sanadkii 1943.
Haddaba, annagoo ka murugeysan , kana tiiraanyeysan geerida Marxuumka , ayaa waxaan Allah uga baryeynaa inuu u naxariisto, qabrigiisana nuur iyo neecaaw udgoon ku siiyo- Amiin.